Ukudibanisa i-Real Nielsen Ukulinganiswa kweentsapho
Zingaphi izihlandlo ozicingayo ukuba ukuba uthatyathwa ukuba ube ngumndeni waseNielsen, imiboniselo yakho oyithandayo ayiyi kukhanselwa? Ndiyazi ukuba ndicinga ukuba amaxesha amaninzi kwiminyaka njengoko ndibukele kakhulu imbonakalo ikhutshwe kwi-blink yeso.
Ukuphila kwimihla ngemihla kumabonwakude kuyathembela kwiingqinamba zeNielsen. Ewe, ukurekhoda kwe-DVR kunye nokubukela i-intanethi kuthathelwa ingqalelo, kodwa xa kufike kuyo, ukulinganisa kwe-Nielsen yona nto iyona nto ibonisa ukuba umboniso weTV uhlala emoyeni.
Ngoko, u-Nielsen unquma njani ukulinganisa? Baqesha iintsapho kuzo zonke iinkalo zobomi kwilizwe lonke ukuba babe yi-'Nelselsen Family 'esemthethweni. Intsapho nganye imele inani elithile lemizi kwimarike yabo (eNew York, eLos Angeles, njl.), Ekunceda ukucacisa 'isabelo' nganye kwinkqubo eyenza.
Ngaba uye wakha wazibuza ukuba zeziphi iintsapho ezingenalutho zaseNielsen? Ngaba ngokwenene balapho? Impendulo yinto eyoyiyo ewe kwaye sinenhlanhla ngokwaneleyo ukuba sibe nethuba lokuphandululana nomnye wabo!
Khawucinge nje xa ndifumanisa ukuba omnye wam osebenza nabo apha e-About.com wayeyintsapho yaseNielsen. Barb Crews, osebenza kwindawo yethu edibanisayo yokuqokelela , wayenomusa ngokwaneleyo ukuphendula yonke imibuzo endiyiyo malunga nenkqubo yeNielsen ...
Umbuzo: Wathini na ukuba ube ngumndeni waseNielsen?
I-Barb: "Ndicinga ukuba yayiyidonsa emnyango (andiyikhumbuli ukuba sifike umnxeba phambi kwesandla, kodwa andicinga ukuba kunjalo).
Bacela imibuzo efanelekileyo. Into emnandi kukuba, sacelwa ukuba sithathe inxaxheba kwiminyaka emithathu okanye emine ngaphambili kwaye sonke sabekwa ukukwenza. Xa beza ukwenza ukuhamba kwangaphambi kokufakela, bafumanisa ukuba babengenakukwenza ngenxa yokuba sinerekhodi ye-DVR kunye neNielsen ayisetyenziswanga. Xa sabuzwa okwesibini (kwiminyaka emininzi kamva) ndabatshela ukuba uNielsen ngoku wayenendlela yokubeka esweni eso sixhobo. "
Umbuzo: Yintoni eyenziwa inkqubo yokusekwa kunye nendlela yokulandelela inkqubo yasebenza ngayo?
I-Barb: "Wow u-set-up wasobuqili.
Okokuqala kufuneka ndixelele ukuba nangona singabantu "ababini" - sinendlu enkulu kunye neTV ezininzi. Ngomnye umabonwakude kwakufuneka uhlolwe, nokuba enye yayisetyenziselwa iiVCR kunye neeDVD kwigumbi leendwendwe.
Sinabantu abathandathu okanye abasixhenxe apha kulo lonke usuku. Ukususela nge-8 ukuya ku-7 ebusuku ukuseka inkqubo yethu kwaye abazange bayeke nakusihlwa! Amadoda aseNielsen avela kumazwe onke asijikelezile. Abadlali abakusetyenzisiweyo nabo bachwephesha abajongene nezixhobo zenu ngelixa usapho lweNielsen. Ngoko, umz. Kukho umntu omnye owayesecaleni lethu kunye nomlingane wakhe kwezinye iindawo ezikufuphi ezaza kwaye wamnceda wamisa. Saxelelwa ukuba yinto enye yokufaka izakhiwo ezinkulu.
Nganye i-TV yayinekhompyutheni edibene kuyo kunye neetoni zeeyile (jonga iifoto). Nganye ibhokisi yebhokisi, iVCR okanye i-DVD irekhodi kufuneka idibaniswe kwaye ihlolwe. Ngoko kwakukho iifayili yonke indawo. Kuthatha iiyure eziliqela kwisitishi se-TV ukuze konke kusebenze.
Emva kokumiselwa, nganye i-TV yayinebhokisi elincinci lokubeka esilawuliweyo kude (bona isithombe). Umntu ngamnye kwindlu wayenombalo, kunye nenani elongezelelweyo leendwendwe. Ngethuba lithile sibona i-TV siza kusebenzisa ukulawula okukude ukusayinela ngubani owayebukele iTV. Ukukhanya kwebhokisi yokubeka iliso kuya kuvulela loo mntu okanye abantu abathile.
Ukuba awuzange usebenzise i-remote ukuze ubhalise xa iTV iphendukile kwiibane iya kuqala ukukhenkceza ize iguqule kuze kube yilapho umntu ebhalisile. Indlela uNielsen ayibeke ngayo, kuya kufuneka ukuba "sivuselele" owayeyibhekile yonke imizuzu engama-45. Ngoko, imizuzu engama-45 kwisiboniso izibane ziya kuqala zikhanyise size sitshintshe kwakhona iqhosha.
Ukutshintsha iziteshi, njl. Ubhalisile konke ngokuzenzekelayo. Ngokwenene sasifanele siqiniseke ukuba "sayinwe" kunye namaqhosha ethu kwibhokisi lokubeka esweni. Sasinebhokisi lokubeka kwiTV nganye.
Ukusuka oko ndikuqondayo - ukuba ndihambe kude neTV ndishiye kuyo kwiiyure ezimbalwa (njengenye kwelinye igumbi), ukuba izibane zazikhanyayo, ikhompyutha yithatha ukuba ithetha ukuba akukho mntu ubukeleyo kwaye akabala bonisa othile.
Sasiqhele ukukwenza ngokukhawuleza kwaye kwakungekho ingxaki nhlobo. "
Q: Zingaphi izindlu ozimele?
I-Barb: "Ungaqinisekanga ukuba uthetha ntoni, kwakuyindoda yam kunye nam.
Kodwa babenomzukulu wam ngaphambi komfundi phantsi nje ngokuba ngumvakatye wambi. Baye bafuna abantu bethu kunye nento endiyiqondayo, bebengayi kusisebenzisa xa sasinabantu abangaphantsi kwe-18 abahlala apha. "
Umbuzo: Emva kokuba uphelile kwaye usebenza, ngaba uphinde uqhubeke neshedyuli yakho yokujonga ithelevishini okanye ucinga kwakhona ngemikhwa yakho yokujonga?
Barb: "Ekuqaleni sasicacisa ngakumbi, kodwa asizange sicinge kwakhona okanye sitshintshe indlela yokujonga ngayo."
Umbuzo: Ngaba ufumene ukuba wazi ngakumbi ngokukhetha kwakho?
Umbuzo: Ngaba yonke into ebonisa ukuba uyayilandela okanye ikhona iqhosha elikhethekileyo omele utyhosele?
I-Barb: "Yonke into ilandelwe (jonga ngasentla) ngaphandle kokuba asizange sitshintshe amaqhosha ethu kwaye u-Nielsen ayicinga ukuba akukho mntu wayebukeleyo okanye ngaphandle kwekamelo. kwikhaya, ukuba saziva ukuba kufuneka siqiniseke ukuba siphethe isiphelo sethu senkxaso kwaye siqiniseke ukuba ukulandelela kwethu kwakukho ngamaxesha onke. Singazihoxisa izibane ezikhanyayo, kodwa yile ndlela kuphela into engayi kuhlolwa ngayo . "
Umbuzo: Ukuba ngaphezulu kokubonisa omnye kwakukho ngexesha elifanayo ukuba ufuna ukubukela, wenze njani ukhetho?
I-Barb: "Sasebenzisa i-DVR irekhodi yekhowudi esebenzisa i-Nielsen, ukuze baxelele xa sibukele loo mi boniso okanye nangona sibukele iiDVD."
Umbuzo: Ngaba ulandelele izilinganiso zeNielsen?
I-Barb: "Ukuba uthetha ukubakhangela xa bebhengezwa, ngamanye amaxesha, kodwa kungekho rhoqo.
Umbuzo: Ngaba uke wabukela umboniso ngenxa yokuba wawusecaleni lokukhansela?
Umbuzo: Ngaba uke wabukela umboniso ngokusekelwe kwingcebiso yomhlobo?
I-Barb: "Ewe, ndicinga ukuba intetho epholileyo yamanzi inokusinceda ukuba ekugqibeleni sibukele ezinye zezinto ezibonakalayo zibonisa kwaye, azizange zibabone iinyanga ezimbalwa zokuqala."
Umbuzo: Ngaba uhlawulwe ukuba ube ngumndeni waseNielsen?
I-Barb: "Ewe, kodwa sincinci. Sifumana i-$ 50 nganye ezintandathu kwiinyanga ezintandathu ukuya kwi-$ 200. Sixelelwe ukuba siya kufumana isipho esibuyiselweyo sesi-100 ekupheleni kweenyanga ezingama-24, kodwa andisayifumanga loo nto. kufuneka banike umnxeba. "
Umbuzo: Wahlala ixesha elingakanani intsapho yaseNielsen?
I-Barb: "Iminyaka emibini."
Umbuzo: Waziva njani ukuba unalo hlobo lombane?
Bharb: Nabani owaziyo, uyazi ukuba ndiyakuthanda ukunika uluvo lwam ukuze kungabikho mbuzo ukuba ndiyakwenza oku xa ndabuza. Andiqinisekanga ukuba kunceda kangakanani intando yam, kodwa ndaziva ngathi sinokuvota. Ukusuka oko ndikuqondayo akukho ziintsapho ezininzi kwilizwe elijongene nokubeka iliso / ukulandelela esikwenzileyo, ngoko kwakumnandi ukuba sikhethwe.
Ndandichukumisekile kakhulu ngokubaluleka kwayo yonke into, sasibizwa ngokuba ngamaxesha amaninzi kwiinyanga ezingama-24 ukuqinisekisa ukuba yonke idatha ekhoyo yangoku iyinto efanayo. umzekelo, uphando olwenziwe kwiimoto, sinazo, iikhomputha, izinto ezinjalo. Ukuba songeze naziphi izixhobo ezitsha (umz. TV entsha) beza kufakela kuthi kwaye basinike isigxina esincinci ngokubanika ukuba bajonge. "
IBha bar ibongeza kwakhona ...
"Izixhobo zazixhunyiwe kumgca wefowuni kwaye zilayishwe ubusuku bonke phakathi kobusuku, ngoko ukuba into ethile ingenakulungile okanye ingabhalwanga kakuhle baya kukwazi ngokukhawuleza kwaye ndiza kufowunelwa umnxeba. beza kuphuma kwaye bafumane into engafanelekanga, njl. Njengoko ndathi bayithatha ngokungathí sina kwaye babenomdla ngokungafuni ukungenelela ngaphezu kokufunekayo. Sasibe nommeli omhle owayenaye kwiinyanga ezingama-24. "
UTheodore Dwight Weld
I-Lafayette College ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Biography kaLudwig van Beethoven
Abaphumelele kwiColorate ekuqaleni
I-Asthma neScuba Diving